Ejypta: Misaona Ireo Mahery Fo Tamin’ny Maspero · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2011 19:10 GMT
Izay nokendrena ho fandrobana ataona antokom-pivavahana, sy teti-dratsy hamotehana ny firaisan-kinan'i Ejypsianina, no vao maika nampitambatra ny hery sy nampijoro tamboho hanaporofoana fa ady ataon'ny fitondrana ejipsianina amin'ny vahoaka ilay alin'ny Alahady Mainty tao Ejipta fa tsy adin'ny Kristianina amin'n Miozolomana.
@Sandmonkey: Izaho no mety voalohany hanambara izao, aza milaza fa namono ireo Kristianina ny tafika. Lazao fa namono ireo Ejypsianina ny tafika. Tsy misy intsony ny vondrona madinika. #maspero
Araka ny fitantarana nataon”i Darwis mikasika ny fihetsiketsehana, nilamina tanteraka ny fihetsiketsehana, niaraka tamina Miozolomana maromaro tonga naneho firaisankina:
Tonga tamin'ny toerana kinendry ihany ny diabe taorian'ny fifandonana natrehina teny antsefatsefan-dalana, ary nivadika sit-in izany araka ny filazan'i Adam Makary:
@adamakary: #Kopta 1000 no nanatanteraka sit-in ao @ #Maspero mandra-pitondra ireo tompon'andraikitra tamin'ny fandorana fiangonana tao #Sohag sy #Aswan eny amin'ny fitsarana
Ahmed Mounir, vavolombelona nanatri-maso, nanamafy izany :
Tampoka teo, nohodidinin'ny fiara mifono vy ny toerana, saika mitovy tamin'ny Zoman'ny Fahatezerana , ary nandona olona maromaro. Ho an'ireo izay tsy mino ahy, jereo ity lahatsary ity.
@Sandmonkey: Lahatsary mahatsiravina ahitana an'i Rasha Maged nandainga sy namporisika ny mpijery hamely ny kristianina http://www.youtube.com/watch?v=E7m08JJdxao #maspero #egypt
Tamin'ny Alatsinainy maraina, nandresy tamin'ny ady sasantsasany ilay mpisolo vava Khalid Ali, nahazo alalana hanatanteraka fandidiam-paty (fizahana ny anton'ny nahafatesana) izy mba tsy hamela ireo rà latsaka ho vita mora.
@MHassan: Tamin'ireo 17 natao fandidiana; 10 no voahitsaky ny fiara. iray maty nisy nanindrona tamin'ny sabatra, ary ny ambiny kosa nisy nitifitra tamin'ny basy.
Taorian'ny filaharan'ny mpivavaka, nisy ny diabe miainga avy eo amin'ny kadetraly ho an'ny amin'ny kianjan'ny Tahrir mba hanomezam-boninahitra ilay mpitolona Mina Daniel izay nangataka talohan'ny nahafatesany tao anaty fiara mpitondra marary mba hiainga eo amin'ny kianja Tahrir ao Kairo, (Ivotoeran'ny revolisiona Ejyptiana) ny fandevenena azy .
Khaled Ali [ar] nahita ny renin'i Mina miresaka irery sy miresaka momba ny zanany lahy maty:
@Khaledali251: Aza manahy, sady mahery aho ny faly noho ianao. Te-ho faty mba ho maritioran'i Ejipta ianao, ary nataonao tokoa izany
Soratra miverina: Ejipta: Mandria Am-piadanana Papa Shenouda III · Global Voices teny Malagasy
[…] Papa, mpanohana ny fitondrana sy ny miaramila. Maro no miresaka manokana ny heviny nandritra ny Fandripahana tao Maspero [mg]. Misy ary ny hevitra sy tsikera melohin'ny mpiserasera izay nilaza fa raha tsy jerena ny […]
19 Marsa 2012, 21:57